Ngoko Ucinga Ukuba Unokudansa imifanekiso enikezwa yi-FOX.
Wazalelwa eRio de Janeiro, eBrazil, ngo-1968, uAlex Da Silva wathatha iminyaka engama-20 ngaphambi kokuba aqale umsebenzi wokudansa. UDavil Silva waqala ukusebenza njengomqeqeshi womdaniso kwiSan Francisco Bay Area, apho wahlonipha khona ubugcisa bakhe ngaphambi kokuba ahlasele. Kwiminyaka emibini ukususela ekuqaleni kukaDailva waya esiteji, uye waba yingcali kwi-mambo, i-salsa, i-tango yase-Argentina kunye nokuguqula ukudansa, kwaye abaninzi banomtsalane ngaye ngokunceda ukuloba indawo yaseCalifornia yokudansa. Umsebenzi kaDailva uye wagubhalwa ngabaontanga bakhe, ngokuphumelela kwi-World Salsa Championships ka-2002 no-2005. Ukongeza kwendima yakhe "Ngoko Ucinga Ukuba Unokudansa," uDailva usebenze noJennifer Lopez, uWill Smith, uPuff Daddy no-Enrique Iglesias kunye neentengiso ezikhethiweyo zeBurger King kunye neCoca-Cola. Emva kokuphumelela kwakhe kokuqala kwiTV, Ubomi bukaDa Silva bubuhlungu xa, ngo-2009, wahlawuliswa ngokudlwengula nokuhlaselwa ngenjongo yokudlwengula. U-Da Silva okwangoku ukhonza isigwebo sejele eli-10.
UBrian Friedman ungomnye wezinto ezikhethileyo ze-choreographer ezidlulileyo kwiminyaka engama-20 edlulileyo. Umthonyama waseChicago uye wasebenza nezinye zezona zidumileyo kwiiminyaka ze-20 neye-21, kuquka iBritney Spears, uBeyonce, uMichael Jackson, uMariah Carey, uHilary Duff, i-Pink, iMya, iNYYNC, iNkosana kunye no-Usher. Ukubambisana kwe-Friedman iminyaka eyi-10 kunye noBrithney Spears uye wabumba ezinye zeentlobo zakhe ezidumileyo, kubandakanywa namavidiyo omculo athi "Inetyhefu" kwaye "Ndingumkhonzi 4 U."
UDan Karaty waqala ukuqwalasela umhlaba wonke xa wenza i-Broadway debut yakhe "kwi-Footloose" ngoxa wayesekholejini. Ngomnyaka olandelayo, ngelixa ephelisa imfundo yakhe kwiYunivesithi yaseNew York, lo dancinger multentented dancer and choreographer waqala ukusebenza kunye noBrithney Spears, owathi wamkhetha ukuba afikelele kwii-2000 MTV Video Music Awards, esithi "Hayi, Ndabuya kwakhona," kwaye I-Pepsi yorhwebo ephezulu. Ukuxhaswa kwimpumelelo yakhe ngeentetho, iKaraty sele ikhethile iivideo zeJessica Simpson "Into encinci" kunye "nokungafihlakeleyo" ngaphezu kokukhonza njenge-choreographer yeendwendwe zakhe zangaphambili. I-Karaty nayo isebenze kunye neemifanekiso ze-pop ezifana no-Kylie Minogue kunye ne-NSYNC, ngaphezu kwe-resume ephawulekayo yokufundwa kweefilimu, kuquka iDisney ethi "Prom."
I-Florida-born choreographer uMia Michaels ngumsunguli, umlawuli wezobugcisa kunye nomculi we-choreographer yenkampani yokuDanisa yaseNew York ehlonishwa ngokukodwa, uye wabamba isikhundla kwi-Alvin Ailey Dance Inkampani kunye noMkhosi weMdaniso wamazwe ngamazwe waseItali, uye wavala amazinyo akhe kunye nabanye abadumileyo kwiindawo zokuzonwabisa. Enye ye-Mia yeyona mingeni engumngeni onzima kunamhlanje usebenze njenge-choreographer yeCeline Dion "kwiNew Day Day" kwiKesars Palace eLas Vegas, apho adala khona iindlela zokudlala abadansi abangama-50, kunye noDion ngokwakhe. Ukongezelela emsebenzini wakhe eLas Vegas, iMichaels yenza izinto ezikhethiweyo zoluhlu olude lweetalente eziphezulu, kuquka iMadonna, iPrince, uGloria Estefan kunye noRicky Martin. Umsebenzi kaMia uye wabonakala kwiimveliso zorhwebo ezinxulumene neBardidi kunye noMike's Hardade. Emva kwexesha lokuphumelela kwexesha lika-Emmy kwi-"SYTYCD," uMia wabeka izinto zakhe kwiNdlela eNkulu eNkulu, kwaye ngo-2015, wakhetha umculo othi "Ukufumana i-Neverland" kwi-Broadway.
Umdaniso webhokisi lomqeqeshi uMary Murphy ukhonza njengomgwebi womdaniso wesizwe, utitshala womdaniso wezobugcisa, umdaniso wokuncintisana kunye nomsunguli we-Champion Ballroom Academy eSan Diego, CA. UMurphy waqalisa umsebenzi wakhe emva kokugqitywa kwi-University of Ohio, xa wafika umdaniso wokufundisa umsebenzi eWashington DC uMurphy kunye nomlingani wakhe yi-Austrian National Champions ngo-1990 kunye no -91 kwaye baqhutyelwa ndawonye kwiNdebe yeHlabathi yeNdebe. Ngoxa wayethatha umhlala-phantsi ekudleni ngokuzibandakanya kwiminyaka yama-1990, uye waqhubeka emenza umqondiso kwihlabathi ngokumboleka kwakhe ukuya kwezinye izakhono zaseHollywood. Uqeqeshwe noMary Steenburgen, uDonnie Wahlberg, uJulia Roberts, uDennis Quaid, uLornzo Lamas, kunye noTed Danson ngeendima ezahlukahlukeneyo. Uyaqhubeka nokuqeqesha abadlali beentambo kwi-studio yakhe kwaye uququzelele iintambo ezimbini zomdaniso wesizwe: i-San Diego Danceport Championships kunye ne-Holiday Dance Classic eLas Vegas. Ngo-2009, eneminyaka engama-51, uMaria ubuyela kumgangatho wokudanisa ukubonisa ukuba usenokwenza oko kukuncintisana, ukuboleka italente yakhe kwi-Broadway show "Bhisa Umgangatho" kwaye ujoyine ukutyelela umbukiso unyaka olandelayo.
Ukuhlaziywa yi-Reality TV Expert Sarah Crow.
Ngokubhekiselele kwi-Visual Basic kunye Neli Sayithi
Konke Okufuneka Ukwazi NgePasika kwiCawa yamaKatolika
Phrinta amaxwebhu ukusuka kwi-delphi - Print PDF, iDOC, XLS, HTML, RTF, DOCX, TXT
Imfazwe Yehlabathi II: Ukulwa nokukhutshwa kwe-Dunkirk